Nigeria: Bitsika Mitatitra sy Miresaka Herisetra Taorian’ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2011 11:37 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataony momba ny Fifidianana Nizeria 2011.
Natao ny 16 Aprily 2011 teo ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ao Nizeria. Goodluck Jonathan no nambara ho mpandresy. Ny mpanaramaso sasany, ka isan'ireny ny The Action Congress of Nigeria (ACN) dia nilaza fa nisy fanodinkodinana ny fifidiana mba hitongilana any amin'ny filoha teo aloha.
Nitranga ny herisetra maro taorian'ny fifidianana tany amin'ireo fanjakana avaratra nahitàna ireo mpanohana an'i Muhammadu Buhari manafika fiangonana, tranon'olona sy paositry ny polisy. Ny fifidianana izay ho mpikambana ao amin'ny antenimieram-panjakana sy ny Gubernatorial tany amin'ny fari-piadidian'i Kaduna sy Bauchi dia nahemotra ho amin'ny 28 Aprily. Ny fifidianana any amin'ireo fari-piadidiana hafa kosa dia hatao amin'ny 26 Aprily. Ny Human Rights Watch dia namoaka fampitandremana ho an'ny Nizeriana rehetra mpitondra raha nilaza kosa ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisampirenena fa manao fanadihadiana momba ireo heloka natao taorian'ny fifidianana ry zareo.
Ity ny famehezana ireo tatitra sy fanehoan-kevitra avy amin'ny bitsika nampiasàna ny tenifototra NigeriaDecides. @zainabsandah manontany tena raha toa ny Nizeriana ka nifidy governemanta “miadam-pamindra” raha ny @rotexonline maniry ny hahalàla raha toa ny polisy Nizeriana na ny Tafi-panjakana mampiasa ny media sosialy mba hifandraisana amin'ny vahoaka.
Henjana ny rivotra iainana ao Nizeria, ary misy ny taitra milaza korontana any aminà fari-piadidiana samihafa. Sary avy amin'i Tom Saater, copyright Demotix (18/04/2011).
Ekeo ny faharesena dia mialà
Be amin'ireo ‘TSY MAHAY RESY’ tamin'ny latsabato ny Sabotsy teo no miezaka fatratra manao izay tsy hanekena ny fifdianana. Azafady mba mialà #MudSlingers #NigeriaDecides
@nkemifejika @DoubleEph #Buhari mila mahatanty ny fahavoazana tamin'ny fifidianana. Tsy mendrika ny atao hoe olom-panjakana ny hiteny fotsiny hoe” Tsy misy idirako izay resaka korontana any”#NigeriaDecides
Mihaino an'i Buhari ao amin'ny CNN. Maninona ilay bandy io raha miala fotsiny e ? #Nigeria #NigeriaDecides tena resy betsaka #tsotraizao lery..
Buhari: any amin'ny fitsarana mandeha, fa tsy eny an-dalambe! #Nigeria #NigeriaDecides
Nisy hala-bato ve ny fifidianana?
#TongasoaEtoNizeria toerana izay aneken'ny lalàna ny hala-bato. #NigeriaDecides #PollWatch2011 #Election234Next #INEC
RT @collinskadiri: Mbola manohy miresaka momba ny hala-bato ihany ry zareo any atsimo any.. Manontany tena ny amin'izay mba ambaran'izy ireo mikasika ireo mpifidy tsy ampy taona tany Avaratra aho #NigeriaDecides
RT @reformerx: Ny herisetra dia mitondra fihemorana, ratra sy hirifiry. Ny fandrosoana nentin'ny fotoana ela dia mirodana iray andro monja. #developnigeria #nigeriadecides
Herisetra aorian'ny fifidianana
Ny fanavaozana ny milina rehetra amin'ny resa-piarovana dia tokony ho tafiditra ho laharam-pahamehana ao anaty fandaharanasan'izay filoha ho avy eo #SSS #NPF #Nigeria #NigeriaDecides
Miara ory amin'ireo fianakaviana rehetra namoy ny zanany (mpikambana tao amin'ny NYSC) sy ny fonenany tao Nizeria, herisetra tany amin'ny faritra Avaratra. #nigeriadecides
Sàkana miaramila, trano kila hotohoto ary fiara may manemitra ny arabe any ambanivohitr'i Kaduna#Nigeriadecides”
Ireo lalam-be nivoaka an'i Kaduna dia rakotra fiara feno hipoka amin'ireo olona mandositra sao mbola hisy indray herisetra hitranga #nigeriadecides
Ny herisetra dia mitondra fihemorana, ratra sy hirifiry. Ny fandrosoana nentin'ny fotoana ela dia mirodana iray andro monja. #developnigeria #nigeriadecides
Arahaba maraina avy aty Kachia fari-piadidian'i Kaduna. Nandany ny alina tontolo tany anaty kirihitra izahay rehefa niteny taminay ny miaramila fa tsy azo antoka ny manohy ny dia. #nigeriadecides
Moa ve ny fiantsoana ny mpanohana mba hiaro ny safidiny midika hoa miantso azy hanao herisetra? #nigeriadecides
Nahita sàkana an-dalambe iray nirehitra ary tsy nisy miaramila izahay omaly. Ireo tompon-tanàna dia vonona hanafika izay rehetra olon-tsy fantatr'izy ireo. #nigeriadecides
Tsy mampino fa dia mbola mitohy henjana hatrany ny zava-drehetra any ambanivohitr'i Kaduna satria mandositra miaraka amin'ny fananany ireo olona eto. #nigeriadecides
Hamela heloka isika, ary efa manao, saingy ny any avaratra amin'ny ankapobeny dia mbola mila manao ezaka betsaka mba hiverenan'ny fitokisan'ny firenena iray manontolo azy. Mety tsy hisy mihitsy izany. #NigeriaDecides
RT @semakof: mangetaheta fandriampahalemana isika. Ity no hany firenena ananantsika. #NigeriaDecides tsy tokony hamafy fisaraham-bazana eo anivontsika. Tokana isika.
Fomba hatao amin'ny faha 26 mba hisorohana ny herisetra. a. matory, b. manao lalao iraisana, c. mijery fahitalavitra. d. manoko resaka, Mba hisy vidiny ny dian-tondronao #Nigeriadecides
zazavavy: Hono ho'aho ry Dada, manomboka amin'ny hoe “indray andro hono” daholo ve ny angano rehetra? Dada: Tsia ry ilay malalan'ny foko, ny sasany manomboka amin'ny hoe ‘Raha izaho no voafidy’ #Nigeriadecides
Natao ny 16 Aprily 2011 teo ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ao Nizeria. Goodluck Jonathan no nambara ho mpandresy. Ny mpanaramaso sasany, ka isan'ireny ny The Action Congress of Nigeria (ACN) dia nilaza fa nisy fanodinkodinana ny fifidiana mba hitongilana any amin'ny filoha teo aloha. Nitranga ny herisetra maro taorian'ny fifidianana tany amin'ireo fanjakana avaratra nahitàna ireo mpanohana an'i Muhammadu Buhari manafika fiangonana, tranon'olona sy paositry ny polisy. Ity ny famehezana ireo tatitra sy fanehoan-kevitra avy amin'ny bitsika nampiasàna ny tenifototra NigeriaDecides.
titre Nigeria: Bitsika Mitatitra sy Miresaka Herisetra Taorian'ny Fifidianana